I-BBEdit ibuyela esitolo sohlelo lokusebenza se-Mac App Store. | Ngivela kwa-mac
I-BBEdit ibuyela esitolo sohlelo lokusebenza se-Mac App Store.
UJavier Porcar | | Mac App Store, eziningana
BBEedit uhlelo lokusebenza oludumile lwe- abahleli bohlelo, eshiye iMac App Store ngo-2014 ngenxa yezimo ezibekwe yi-Apple. Isoftware iqhubekile nokwenza ngcono futhi ikhule kusukela lapho, kepha kusuka ekhasini lonjiniyela.
Akusilo icala lokuqala esilaziyo ngaleli sonto. Ukujoyina i-Microsoft Office noma i-CoreDRAW kuleli sonto kube uhlelo lokusebenza lweRapidweaver olubuyela esitolo sohlelo lokusebenza lwe-Apple, ikakhulu ngenxa ukuxoxisana kabusha kwezimo ebekwe yi-Apple konjiniyela. Kulokhu, uBare Bones, umnikazi weBBEdit, uqalise kabusha ukusebenzisana ne-Apple.
Noma kunjalo, izindaba azimangazi ngokuphelele. Oxhumana nabo bokuqala benzelwa kwifayela le- WWDC ebibanjwe ngoJuni odlule. Kwakungenye yokubheja kuka-Apple njengokucwebezela ikhekhe. isitolo esisha sohlelo lokusebenza yama-Mac, ngokukhululwa kwe-MacOS Mojave. Ngaleso sikhathi abafana abavela ku-Bare Bones babekhangisa ngenguqulo engu-12.6. Ukusizakala ngokuphuma ku-Mac Apple Store kuza inguqulo 12.6.3 ngobuningi bezici ezintsha.
kuze Izici ezintsha ezingama-300 Sithola inguqulo yamanje uma uyiqhathanisa nenguqulo ka-2014. Uma ungayazi isoftware ye-BBEdit ungakwazi zama uhlelo lokusebenza mahhala isikhathi esiyizinsuku ezingama-30. Ngemuva kwalesi sikhathi, i-BBEdit iba imodeli yokubhalisa Ungakhokhela i- € 3,99 ngenyanga noma i- € 41,99 ngonyaka, uma ufuna ukusebenzisa imisebenzi ethuthukile yohlelo lokusebenza.
Ngaphandle kwemodeli yokubhaliselwe, i-BBEdit iyatholakala nge- ukukhokha okukodwa ngentengo engu- $ 50. Umehluko phakathi kwemodeli eyodwa nenye yi izibuyekezo. Enguqulweni yokukhokha yesikhathi esisodwa, ngeke ube nelungelo lemisebenzi emisha, ngenkathi singajabulela izici ezintsha kunguqulo yokubhaliselwe. Vele, uma unesistimu yokusebenza yeMojave, ngeke ube nenye indlela ngaphandle kokuthenga ilayisense, ngoba inguqulo yokubhalisa iqala nge-macOS 10.14.2
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » eziningana » I-BBEdit ibuyela esitolo sohlelo lokusebenza se-Mac App Store.
Ukuvuvukala kwamabhethri ku-Apple Watch nasenkantolo
Ama-Amazon Echos ase-Ireland nase-United Kingdom manje asehambisana ne-Apple Music